Cataracts (အတွင်းတိမ်) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win | ရေးသားသူ Dr. Sandar Lin
Update Date မေ 12, 2020 .3mins read
Cataracts (အတွင်းတိမ်) ကဘာလဲ။
အတွင်းတိမ်ဆိုသည်မှာ မျက်စိအတွင်းရှိ မှန်ဘီလူး(Lens)ကို တိမ်ဖုံးစေသော မျက်စိရောဂါ တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အတွင်းတိမ်ဖြစ်နေသော သူသည် မြူနှင်းကျနေသော ပြတင်းပေါက်မှာ တစ်ဆင့် ကြည့်နေရသကဲ့သို့ ခံစားရတယ်။ အတွင်းတိမ် အများစုက တဖြည်းဖြည်း စဖြစ်လာပြီး အစပိုင်းအခြေ အနေတွင် ဒုက္ခမပေးပါ။ သို့သော် အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ အတွင်းတိမ်သည် မြင်ကွင်းကို နှောင့်ယှက်လာနိုင်ပါတယ်။ ကားမောင်း၊ စာဖတ်နဲ့ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲများဖြစ်လာ စေတယ်။
Cataracts (အတွင်းတိမ်) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
ဒီရောဂါဟာ အဖြစ်များပါတယ်။ များသာအားဖြင့် အသက်(၈၀)ကျော် အမျိုးသားရော၊ အမျိုးသမီးမှာပါ ဖြစ်တတ်တယ်။ ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေသော အကြောင်းရင်းများကို ရှောင်ခြင်း ဖြင့် ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေနှုန်းကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များ ထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Cataracts (အတွင်းတိမ်) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
အတွင်းတိမ်ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
အတွင်းတိမ်သည် မျက်လုံးတစ်ဖက်တည်း သို့မဟုတ် နှစ်ဖက်လုံးတွင် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မျက်လုံး တစ်ဖက်ကနေ အခြားတစ်ဖက်ကိုတော့ မကူးနိုင်ပါ။ လက္ခဏာအချို့ကို အောက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။
ကားရှေ့မီး၊ နေရာင် သို့မဟုတ် မီးလုံးများကိုကြည့်လျှင် စူးရှတောက်ပသော အလင်းကို ခံစားရခြင်း။ ထိုအလင်းရောင်များ၏ ပတ်လည်တွင် အကွင်းတစ်ခုကို မြင်နေရသလို ခံစားရခြင်း။
မျက်မှန် ပါဝါ မကြာခဏပြောင်းနေခြင်း
အထက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့အထဲမှာ မပါဝင်တဲ့ အခြားသော လက္ခဏာတွေလည်း ရှိနိုင်ပါသေး တယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ့်ဆီမှာ ရောဂါလက္ခဏာ တစ်ခုခုများရှိနေမလားဆိုပြီး စိုးရိမ်နေမယ်ဆိုရင် ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
အထက်မှာ ဖော်ပြခဲ့သော လက္ခဏာများရှိနေပြီး အနှောင့်အယှက်ပေးလာသောအခါ၊ ပို၍ ဆိုးဝါးလာသောအခါ
လက္ခဏာများသည် သင့်နိစ္စဓူဝ လုပ်ငန်းများအပေါ် နှောင့်ယှက်လာသောအခါ
လူတိုင်းရဲ့ခန္ဓါကိုယ် တုံ့ပြန်မှုဟာ မတူညီနိုင်ပါဘူး။ သင့်အခြေအနေအတွက် ဘာအကောင်းဆုံး လဲဆိုတာကို သင့်ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်တာက အကောင်းဆုံးပါပဲ။
Cataracts (အတွင်းတိမ်) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
အတွင်းတိမ် အများစု၏ ဖြစ်ပွားမှုအကြောင်းရင်းမှာ အသက်ကြီးလာခြင်း သို့မဟုတ် မျက်လုံးတစ်ရှူးများ ပြောင်းလဲမှုကိုဖြစ်သော ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလို့ဖြစ်တဲ့ အတွင်းတိမ်(၂)မျိုး ရှိပါတယ်။
ပထမတစ်မျိုးက ပရိုတင်း အစုအဝေးများ မျက်လုံးတွင်းရှိ မှန်ဘီလူးတွင် စုပုံလာကာ ပုံရိပ်ကြည်လင် ပြတ်သားမှုကို အားနည်းလာစေတယ်။
ဒုတိယတစ်မျိုးက ကြည်လင်နေတဲ့ မှန်ဘီလူးသည် တဖြည်းဖြည်းအရောင်ပြောင်းပြီး ဝါညိုရောင်သန်းလာတယ်။ ဒါကြောင့် ပုံရိပ်များသည် ဝါညိုရောင်သန်းလာခြင်း ဖြစ်တယ်။
မျက်လုံးမှန်ဘီလူးသည် ရေ၊ ပရိုတင်းနဲ့ အများဆုံး ပြုလုပ်ထားတယ်။ အသက်အရွယ်နဲ့ လိုက်ပြီး မှန်ဘီလူးက ပိုမိုထူလာကာ ပျော့ပျောင်းမှု အားနည်းလာတယ်။ ထိုကနေ ပရိုတင်းအစုအဝေးဖြစ် လာပြီး မျက်လုံးအတွင်း နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ အလင်းအာရုံခံအလွှာ Retina ဆီကို အလင်းရောက်တာ ကိုကြားဝင်တားဆီးတယ်။ ဒါကြောင့် အမြင်အာရုံဝေဝါးပြီး မှုန်လာတယ်။
မှန်ဘီလူးအရောင်ပြောင်းခြင်းဟာ ဝါညိုရောင်ဖျော့ ကနေစပြီး တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ပိုဆိုးလာမယ်။ နောက်ပိုင်း အပြာရောင် သို့မဟုတ် ခရမ်းရောင်ကို ခွဲခြားနိုင်စွမ်းမရှိတော့တဲ့အထိ ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ် ရှိတယ်။
Cataracts (အတွင်းတိမ်) ဖြစ်နိုင်ခြေကို ဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အတွင်းတိမ် ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကို မြင့်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
အသက်အရွယ် – အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ အတွင်းတိမ် ပိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
မိသားစုရာဇဝင် – မိသားစုထဲမှာ အတွင်းတိမ်ဖြစ်တဲ့လူရှိရင် ဖြစ်နိုင်ချေများပါတယ်။
မျက်စိထိခိုက်ဖူးခြင်း သို့မဟုတ် မျက်စိခွဲစိတ်ဖူးခြင်း
အရက်သောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း
သွေးတိုး၊ ဆီးချို အဝလွန်ခြင်း ကဲ့သို့သော ရောဂါများရှိခြင်း
နေရောင်နဲ့ ကြာရှည် ထိတွေ့ခြင်း
စတီးရွိုက်ဆေးများ (Corticosteroid) ကြာရှည်သောက်သုံးခြင်း
Cataracts (အတွင်းတိမ်) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ရောဂါအတည်ပြုနိုင်ဖို့ သင့်ဆရာဝန်က သင့်ရောဂါရာဇဝင်ကိုမေးပြီး မျက်စိစစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ မျက်စိအထူးကုဆရာဝန်ဆီလွှဲပေးပြီး သူကအတွင်းတိမ် ဟုတ်၊ မဟုတ် သေချာအောင် စမ်းသပ်မှုများ ထပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
Cataracts (အတွင်းတိမ်) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
အမြင်အာရုံ မထိခိုက်လျှင် ဆေးကုစရာမလိုပါ။ သင့်အမြင်အာရုံ ဆိုးဝါးလာပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများ မလုပ်နိုင်တော့လျှင် တစ်ခုတည်းသော ကုသနည်းမှာ ခွဲစိတ်မှုပင်ဖြစ်တယ်။
အတွင်းတိမ် ခွဲစိတ်မှုဟာ ယေဘူယျအားဖြင့် စိတ်ချရပြီး ဆေးရုံတက်စရာမလိုပါ။ ခွဲစိတ်နည်း (၂)မျိုးရှိပါတယ်။
ခွဲကြောင်းသေးသေးလေးနဲ့ ခွဲစိတ်ခြင်း (Phacoeulsification)။ မျက်ကြည်လွှာဘေးတွင် သေးငယ်သော ခွဲစိတ်ရာတစ်ခုပြုလုပ်ပြီး ဆရာဝန်က အသံလှိုင်းနဲ့ အတွင်းတိမ်ကို ချေလိုက် တယ်။ ပြီးမှ မှန်ဘီလူးကို စုပ်ထုတ်ပြီး ဖယ်ရှားတယ်။
နောက်တစ်မျိုးကတော့ ပို၍ရှည်လျားသော ခွဲစိတ်ကြောင်းမှတစ်ဆင့် မှန်ဘီလူးတွင်းမှ တိမ်ကို ဖယ်ရှားကာ ကျန်ရှိနေသော မှန်ဘီလူးကို စုပ်ထုတ်လိုက်တယ်။ ထိုနည်းကို Extra capsular surgery လို့ခေါ်ပါတယ်။
ခွဲစိတ်နည်း(၂)မျိုးစလုံးတွင် သဘာဝမှန်ဘီလူးနေရာမှာ လူထုတ်လုပ်ထားသော မှန်ဘီလူး Artificial lens နဲ့ အစားထိုးပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှုဟာ တစ်နာရီကြာမြင့်ပြီး နာကျင်မှုမရှိပါ။ ဆရာဝန်က မျက်စိကို ထုံသွားအောင် မျက်စဉ်းခတ်ပေးပါတယ်။ ခွဲစိတ်မှု တောက်လျှောက်မှာ သင်ဟာနိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
လူနေမှု ပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေ အသုံးပြုခြင်းက အတွင်းတိမ်ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် အတွင်းတိမ်ကို ကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်အမြင်အာရုံဟာ နေ့စဉ်ပုံမှန်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာမှာ အနှောင့်အယှက်ဖြစ်လာရင် ဆရာဝန်ဆီ ချက်ချင်းသွားပါ။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာနဲ့ နေရောင်ကြာရှည်မခံရအောင် မျက်စိကို ကာကွယ်ပါ။ အထူးသဖြင့် ပူပြင်းသော နွေရာသီမျိုးတွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် UVA ရော UVB ပါ ၁၀၀% ကာကွယ်ပေးနိုင်သော နေကာမျက်မှန်ကို တပ်ဆင်ပါ။
ဆီးချိုရောဂါရှိရင် သွေးတွင်းသကြားဓါတ်ကို ပုံမှန်ထိန်းနိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။ သွေးတွင်း သကြားဓါတ်မြှင့်တာနဲ့အမျှ အတွင်းတိမ်ရောဂါ ပိုဆိုးလာနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
အိမ်မှာ အလင်းရောင် ကောင်းကောင်းရအောင်လုပ်ပါ။
ညဖက် ကားမောင်းခြင်းကို တတ်နိုင်သမျှ ရှောင်ပါ။
အကယ်၍ သင့်မှာ မေးခွန်းတွေရှိမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် သင့်တော်တဲ့အဖြေရှာဖွေနိုင်ဖို့ ဆရာဝန် နဲ့ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Ferri, Fred. Ferri’s Netter Patient Advisor. Philadelphia, PA: Saunders / Elsevier,
Print edition. Page 713
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., &amp; Albert, R. K. (2009). The Merck manual
home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Page
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 15, 2020 .2mins read
သားအိမ်ထဲမှာ ကြိုး ပျောက်နေပြီဆိုရင်
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဧပြီ 27, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မတ် 12, 2018 .2mins read